‘नेपालमा जन्मेका मात्रै राष्ट्रवादी ? ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
असार ९, २०७७ कुलचन्द्र न्यौपाने
यो विषयको चिन्ता र चासो संसद् तथा राजनीतिक दलहरूभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणु यादवसँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढायो । यसकै कारण मधेसका अधिकांश भूभागमा असन्तुष्टि बढेको छ, किन ?
यो मधेसको मात्रै सवाल होइन । अंगीकृत नागरिकताको सवाल पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि पनि हो । संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नागरिकताबाहेक हाम्रो देशमा कुनै अरू आधार कार्डको व्यवस्था छैन । कुनै विदेशी छोरी विवाह गरेर आइन् भने सात वर्षसम्म सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित गर्नु समाज, परिवार र व्यक्तिका लागि समेत राम्रो हुन्न । विवाह गर्नु त अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भइसकेको छ । विवाह गरेर आइसकेपछि खासगरी हाम्रोजस्तो मुुलुकमा नागरिकता भएन भने उसले भोलिपल्टदेखि नै समस्या भोग्नुपर्छ । बैंक खाता खोल्नेदेखि सामाजिक काम र आकस्मिक समस्या परेमा नागरिकता चाहिन्छ । राजनीतिक अधिकारका विषयमा सात वर्ष कुर्नु राम्रै कुरा हो । राजनीतिमा आउन सम्बन्धित देशको सबै कुरा बुझ्नु पनि पर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ ।
नेपाली चेली भारतमा विवाह गरेर जाँदा सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने तर हाम्रोमा आउनासाथ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्कमा समानता पनि देखिन्न नि ?
त्यो गलत तर्क हो । भारतमा महिला होस् कि पुरुष सबैले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यहाँ महिला र पुरुषमा विभेद छैन । अर्को कुरा नागरिकता नभए पनि मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डमार्फत राज्यको उच्च पदमा जानेबाहेक सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । विवाह गरेर जानासाथ रासन कार्ड पाउँछन् । त्यसमार्फत सबै व्यवहार खुल्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो प्रावधान छैन । जेमा पनि नागरिकतै चाहिन्छ । नेपाल र भारतका बीचमा धेरै फरक छ । त्यसैले नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी कानुन बनाइनु हुन्न ।
विधेयकले राजनीतिकबाहेकका व्यावहारिक समस्या खुलाउन आवासीय परिचयको व्यवस्थासमेत सँगै गरेको छ । यो गरेपछि त सात वर्षको प्रावधानले के अप्ठ्यारो पार्छ र ?
समितिले आवासीय परिचयपत्रको जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यस्तो प्रावधान हाम्रो संविधानमा छैन । संविधानमा नभएको व्यवस्था राखेर यो अधिकार र त्यो अधिकार हुन्छ भन्नु गलत छ । संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार पाउने अवस्था पनि हुन्न, समितिले संविधानबाहिरको प्रावधान कानुनमा राख्न पनि मिल्दैन । संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ । त्यस्तो आधार कार्ड कसरी बाँड्ने ? आधार कार्डमा पनि पहिचानको समस्या निम्त्याइन्छ । सम्बन्धित अधिकारीले को हो, कसो हो भन्ने अवस्था आउँछ । वर्षाैंसम्म त्यो आवासीय परिचयपत्र पनि नपाउने अवस्था रहन्छ । सत्तारूढ दलले गलत काम गरेको छ । नक्कली नागरिकता लिने व्यक्तिहरूलाई कडाइ गर्नुपर्छ । हरेक कुरा पहिचान गरेर दिनुपर्छ । सदियौंदेखि हाम्रो मान्यता पनि यही हो ।
समितिले अघि बढाएकै विधेयक संसद्ले पारित गर्‍यो भने त्यसले कस्तो असर पार्छ ?
कोरोना संक्रमणका बेला विवाद हुने गरी विधेयक नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जनसंख्याका आधार मान्ने हो भने नेपालमा बढिरहेको संक्रमण बढी हो । जनताले राहत पाएका छैनन् । बेरोजगारको समस्या छ । यस्तो बेलामा विधेयक ल्याएर समाज भड्काउने कुरा राम्रो होइन । राष्ट्रिय एकता बनिरहेका बेला आपसमा विभाजन ल्याउनु दुर्भाग्य हो ।
भारतसँग अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एक बनाइराख्न सकेको भए सरकारको सफलता पनि हुन्थ्यो । अर्को पक्ष, संविधानमा उल्लेखित नभएको कुरा समितिले ल्याउन पनि हुन्थेन । संविधान मिचेर यस्तो प्रावधान राखिएको छ । बहस चलाउनुपर्थ्यो, सर्वदलीय बैठक चलाउनुपथ्र्यो । कसरी अघि बढाउने ? सहमति कसरी जुटाउने भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सहमतिमा विधेयक ल्याउनुपर्थ्यो ।
अब कसरी निकास निस्किन्छ त ?
विधेयकको यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्छ । संसद्मा प्रवेश गरेपछि यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले पनि यस्तो प्रावधान राखिएको हो भन्ने तर्क छ, यसलाई तपाईं स्विकार्नु हुन्न ?
नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको कुरा होइन । म पनि अंगीकृत नागरिक हुँ । मैले नागरिकता लिएको ३५ वर्ष भइसकेको छ । २०४८ सालदेखि म निरन्तर राजनीतिमा छु । अंगीकृत नागरिकता लिएर हामीले राष्ट्र अहितको काम के गरेका छौं त ? नेपालमा जन्मेकै भरमा सबै नेपाली पनि बन्न सकेका छैनन् । जन्म त नेपालमा भयो तर उनीहरूको कर्मभूमि अरू नै देशमा बनेको छ । हामीले नेपाललाई कर्मभूमि बनाएका छौं ।
अंगीकृत नागरिकता दिँदा कसरी राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ? अपवादमा एक–दुई व्यक्ति देशलाई माया नगर्ने पनि होलान् । अहिलेसम्म राष्ट्रियताको कुरामा कसैले खलल पारेन भने अहिले कसरी यस्तो कुरा आइरहेको छ ? राष्ट्रियताको नारा दिएर, जनताको मनमा गलत भावना उब्जाइदिएर सरकारले आपसमा भिडाउने काम गरिरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण र गलत छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
तपाईंकै पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले हालै नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने सन्दर्भमा खेलेको भूमिकाले पनि यस्तो प्रावधान राख्नलाई बल मिलेको भन्ने भनाइ छ नि ?
लिपुलेक र कालापानीका विषयमा सुजाता कोइराला र पद्मा अर्यालले पनि विवादास्पद भनाइ राखेका छन् । यो भाग हाम्रो होइन भन्नेजस्तो भनाइ राख्दा उनीहरू अराष्ट्रिय नहुने तर सरिता गिरी हुने भन्ने कुरा तर्कसंगत भएन । सरिता गिरीजस्ता व्यक्ति नेपालमा जन्मिएका पनि छन् । राष्ट्रभक्ति राख्ने मजस्ता पनि होलान् । एक व्यक्तिका कारणले सम्पूर्ण अंगीकृत बदमास भए भन्ने कुरा गलत हो ।
नेपालमा जन्मेका कारण मात्रै राष्ट्रवादी हुन्छ ? यो मान्यताले देशलाई हाँक्न हुन्न । एक व्यक्तिका कारणले देशलाई बदनाम गर्ने र जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गर्न हुन्न । सबै व्यक्तिका आ–आफ्ना मान्यता छन् । मैले त भारतको काम गरेको छैन नि ! नेपालकै लागि काम गरेको छु । जुन देशमा काम गरेका छौं, त्यही देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मलगायत धेरैको छ ।
पम्फा भूसाल भन्छिन्-‘विदेशी र स्वदेशीबीच फरक गर्न खोजेका हौं’
प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:०२
असफलता सिटीलाई प्रेरणा बन्‍ने
म्यानचेस्टर — म्यानचेस्टर सिटीले यसपल्टको इंग्लिस प्रिमियर लिग उपाधि गुमाउने त निश्चित जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले सिटीका व्यवस्थापक पेप ग्वार्डिओला मान्छन्, यो असफलताले क्लबलाई अर्को सिजन राम्रो खेल्न प्रेरित गर्नेछ ।
गत वर्ष उनको टिम एक दशकयता लगातार लिग उपाधि जित्ने पहिलो टिम बनेको थियो । ठीक त्यही बेला उनले आफ्ना खेलाडीलाई चेतावनी दिएका थिए, अबको सिजन सजिलो हुने छैन ।
यस्तै भयो भने ग्वार्डिओला मान्छन्, लिग उपाधि रक्षा गर्न नसकेको चोट र पीडाले आफ्ना खेलाडीलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिन बाध्य पार्नेछ । उनले भनेका छन्, ‘यो सिजनको सुरुआतमा जे भयो, त्यसबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्छ । लिभरपुलविरुद्ध कम्युनिटी सिल्ड जितेपछि हामी खुसी त भयौं, तर लगत्तै लिगका केही खेलमा राम्रो गर्न सकेनौं र अंक गुमायौं । यो हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं । एउटा तथ्य के निश्चित छ भने प्रत्येक सिजन हाम्रो विपक्षी टिम अझ झन् बलियो हुनेछ ।’
ग्वार्डिओलाले थपे, ‘अबको सिजन फेरि एकपल्ट लिभरपुल बलियो नै रहनेछ । चेल्सीले पनि कसरी फुटबल बजारमा लगानी गर्नेछ, त्यो हेर्नलायक हुनेछ । म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छ । यस्तै टोटेनहमका प्रमुख खेलाडी पनि चोटमुक्त भएर मैदानमा फर्कंदैछन् । जोसे मोउरिन्होको अनुभवी नेतृत्वमा टोटेनहम राम्रो गर्न सक्षम छ । मिखेल अर्टेटाको नेतृत्वमा आर्सनल अनि ब्रेन्डन रोजर्सको नेतृत्वमा लेस्टर सिटी पनि अझ बलियो हुनेछन् ।’
उनले अब आफ्नो टिमको उद्देश्य सकेसम्म चाँडै अर्को सिजनका लागि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने लक्ष्य रहेको बताए । उनको योजना छ, ‘हामी सकेसम्म चाँडै बढीभन्दा बढी अंक जितेर च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुन चाहन्छौं । अबको दुई तीन सातामा युरोपेली फुटबल महासंघले गर्ने निर्णय पनि आउने छ ।’
युरोपमा खेल्नबाट महासंघले लगाएको दुई वर्षको प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध क्लबले ‘कोर्ट अफ आर्बिटेसन’ मा गरेको अपिलको निर्णय आउने क्रममा छ ।
लेरोय सानेले यो सिजन सिटी छाड्ने सम्भावना रहेको स्थितिबारे ग्वार्डिओलाले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त राम्रा खेलाडी छन् । गाब्रियल जेसस, फिल फोडेन र रहिम स्टर्लिङका रूपमा हामीसँग अगाडि खेल्ने खेलाडी छन् । हामीसँग अन्य विकल्प हुन सक्नेछन् । तर यो सबै निर्णयका लागि यो सिजन अन्त्यसम्म कुर्नुपर्नेछ ।’
उनले चोटबाट गुज्रिइरहेका बेन्जामिन मेन्डीको सिटीमा लामो भविष्य रहेको बताए । ग्वार्डिओलाले मेन्डी चाँडै मैदानमा फर्कन सक्ने विश्वास पोखे ।
प्रकाशित : असार ९, २०७७ १०:५९